Ahoana ny famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly ▷ arangi️
Ahoana ny famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly. Nandritra ny tantara dia nanandrana namaly ny niandohan'izao tontolo izao ny kolontsaina samihafa. Etsy ankilany, ny siansa dia manandrana manome fanazavana kely momba io lohahevitra io. Na izany aza, ny tantara be mpahalala sy be mpandinika indrindra nanerana ny Andrefana nandritra ny an'arivony taona maro dia ilay notantaraina tao amin'ny Baiboly.
Na dia marina aza fa ankehitriny dia tsy azo inoana ny mino an'izany el tontolo azo noforonina tao anatin'ny 7 andro, marihina fa ny Baiboly dia tsy asa ara-bakiteny fa asa soratra. Ka afaka mahita fahamarinana lehibe momba ny fahariana an'izao tontolo izao isika.
1 Ahoana ny famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly
2 Andro voalohany ny famoronana an'izao tontolo izao araka ny Baiboly
3 Andro faharoa
4 Andro fahatelo
5 Andro fahefatra
6 Andro fahadimy
7 Andro fahenina
7.1 Nanao ahoana ny famoronana ny olona araka ny baiboly
8 Andro fahafito famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly
Araka ny Baiboly, ny fahariana an'izao tontolo izao dia asan'andriamanitra. Amin'ny teninao, Andriamanitra namorona ny singa rehetra eo amin'izao rehetra izao ary nanome aina ny zavaboary rehetras. Tany am-piandohan'ny famoronana dia tsy nisy endrika ny tany, tsy nisy afa-tsy haizina, rano misavoritaka ary ny Fanahin'Andriamanitra no nifindra teo amboniny. Avy eo, tao anatin'ny herinandro dia noforonin'Andriamanitra izao tontolo izao fantatsika.
Andro voalohany ny famoronana an'izao tontolo izao araka ny Baiboly
Tamin'ny andro voalohany nahariana an'izao tontolo izao dia nilaza Andriamanitra hoe "Misia mazava" dia niseho ny mazava. Nisaraka ny mazava sy ny maizina, ary Andriamanitra tsy niantso ny fotoana intsony andron'ny hazavana sy ampahany amin'ny fotoana ao amin'ny alina maizina. Izany no nisehoan'ny andro voalohany.
Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary aizina no tambonin'ny lalina; ary ny Fanahin'Andriamanitra nifindra tambonin'ny rano.
Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka hisy mazava; ary nisy mazava;
Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava; ary Andriamanitra nampisaraka ny mazava sy ny maizina.
Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe Andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Ary harivariva sy maraina izany andro iray izany.
Genesisy 1: 1-5
Andriamanitra no namorona ny lanitra ety an-tany
Amin'ny andro faharoa, Andriamanitra no nahary ny lanitra (ny rivotra iainana) ambonin'ny tany. Ny lanitra dia nanasaraka ny rano tao anaty rano, teto ambonin'ny tany, tamin'ny rano tao anaty toera-etona. Tonga àry ny tsingerin'ny rano.
Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia habakabaka eo afovoan'ny rano, ary saraho ny rano amin'ny rano.
Ary Andriamanitra nanao ny habakabakaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka. Ary dia nisy izany.
Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra. Ary ny tolakandro sy maraina no andro faharoa.
Genesisy 1: 6-8
Tamin'ny andro fahatelo dia namorona ny tany Andriamanitra
Amin'ny andro fahatelo, Namorona ny tany maina Andriamanitra. Nanarona ny tany manontolo ny rano, ka nasain'Andriamanitra nihemotra izy ireo ary navelany hisarona ny faritra sasany. Andriamanitra niantso ny faritra maina an'ny Tierra ary amin'ny ranon'ny ranomasina. Izany no nitsanganan'ny kontinanta sy nosy.
Tamin'io andro io ihany dia nanarona an'izao tontolo izao Andriamanitra zavamaniry. Ny karazan-javamaniry rehetra dia nipoitra avy amin'ny tany, ny karazan-javamaniry rehetra, ny zavamaniry rehetra manana fahaizana miteraka.
Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka hiangona ny rano izay ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ka dia ho maina izy. Ary dia nisy izany.
Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany; ary ny rano tafangona dia nataony hoe ranomasina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka ny tany haniry ahitra sy ahitra izay manome voa; ny hazo fihinam-boa izay mamoa araka ny karazany avy, ny voa ao aminy dia eo amin'ny tany. Ary dia nisy izany.
Ka ny tany dia namoa ahitra maintso, ahitra izay mamoa voa, araka ny natiorany, ary hazo mamoa, izay misy voa ao aminy, samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Ary ny hariva sy ny maraina no andro fahatelo.
Genesisy 1: 9-13
Tamin'ny andro fahefatra Andriamanitra dia namorona ny kintana
Tamin'ny andro fahefatra, Andriamanitra dia namorona ny vatana selestialy hanamarihana ny fandehan'ny fotoana (andro, volana, taona ...). Nofenoiny ny lanitra (habakabaka) kintana ary namorona kintana lehibe noho ny tany (ny Sol) hampamirapiratra ny andro. Andriamanitra koa no nahary ny volana, kely kely kokoa, hanazava ny alina.
Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary ho famantarana ho an'ny fizaran-taona, ho an'ny andro sy ny taona,
ary aoka ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy hanazava ny tany. Ary dia nisy izany.
Ary Andriamanitra nanao ireo fanazavana roa lehibe; ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro, ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina, izy koa no nanao ny kintana.
Ary napetrak'Andriamanitra teny amin'ny habakabaky ny lanitra izy hanazava eny ambonin'ny tany,
ary hanapaka ny andro sy ny alina ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Ary ny hariva sy ny maraina no andro fahefatra.
Genesisy 1: 14-19
Tamin'ny andro fahadimy dia namorona biby anaty rano Andriamanitra
Tamin'ny andro fahadimy, Andriamanitra dia namorona ny biby anaty rano. IZY no nandidy an'io ary ny rano feno trondro sy biby anaty rano hafa, lehibe sy kely. Namorona koa Andriamanitra akoho amam-borona, izay nametraka azy hiaina ety an-tany sy hanidina manerana ny lanitra. Andriamanitra nitahy ny vorona sy ny biby anaty rano ary nandidy azy ireo hamerina hameno izao tontolo izao.
Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka ny rano hamoa zava-manan'aina sy vorona izay manidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra.
Ary Andriamanitra nahary ny biby goavam-be any amin'ny ranomasina sy ny zava-manan'aina mihetsiketsika rehetra, izay nataon'ny rano araka ny karazany avy, sy ny voro-manidina rehetra, samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary fenoy ny rano ao anaty ranomasina, ary ataovy betsaka ny vorona etỳ ambonin'ny tany.
Ary ny hariva sy ny maraina dia andro fahadimy.
Genesisy 1: 20-23
Tamin'ny andro fahenina dia namorona ny biby terestrialy sy ny olona Andriamanitra
Tamin'ny andro fahenina dia namorona Andriamanitra biby an-tanety. Ny karazam-biby rehetra monina eto an-tany ka tsy manidina dia noforonina tamin'io andro io, samy manana ny fahaizany miteraka.
Ary hoy Andriamanitra: Aoka ny tany hamokatra zava-manan'aina samy araka ny karazany avy, biby sy bibilava ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy. Ary dia nisy izany.
Ary Andriamanitra nanao ny bibi-dia, samy araka ny karazany avy, sy biby fiompy isan-karazany, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Genesisy 1: 24-25
Nanao ahoana ny famoronana ny olona araka ny baiboly
Ka dia niresaka tamin'Andriamanitra Andriamanitra ary nanapa-kevitra ny hamorona zavaboary manokana, amin'ny endriny sy ny endriny, mba hanjaka amin'ny biby rehetra izay noforoniny. Nipoitra àry izy ireo ny lehilahy sy ny vehivavy.
Andriamanitra nitahy ny lehilahy sy ny vehivavy ary nandidy azy ireo hiteraka, hameno ary hanjaka amin'ny tany. Ny biby terestrialy, anaty rano ary manidina rehetra dia teo ambany fahefany. Andriamanitra koa nanome zavamaniry ho sakafon'ny olombelona sy ny biby rehetra. Izany no nanatanterahan'Andriamanitra ny famoronana an'izao tontolo izao.
Ary hoy Andriamanitra: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary manapaha ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina, na ny biby, na amin'ny tany rehetra, na amin'ny biby rehetra izay mandady ambonin'ny tany.
Ary nitso-drano azy Andriamanitra ary nanao taminy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha; Fenoy ny tany, ka tantano, ary manapaha ny hazandrano ao anaty ranomasina, ny voro-manidina, ary ny biby rehetra mihetsika ambonin'ny tany.
Ary hoy Andriamanitra: indro, nomeko anao ny zava-maniry rehetra izay misy voa, izay ambonin'ny tany rehetra, ary ny hazo rehetra izay misy voa sy misy voa; Ho sakafo ho anao ireny.
Ny biby rehetra ambonin'ny tany sy ny voro-manidina rehetra ary izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany, dia misy aina, dia hohanina ny zava-maitso rehetra. Ary dia nisy izany.
Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra. Ary ny hariva sy ny maraina dia andro fahenina.
Andro fahafito famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly
Tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Andriamanitra ary nitahy ny zavatra noforoniny
Amin'ny andro fahafito Niala sasatra Andriamanitra. Afa-po izy satria tsara daholo ny zavatra noforoniny. Notahian'Andriamanitra ny andro fahafito ary nohamasininy satria andro fitsaharana izany.
Dia vita ny lanitra sy ny tany mbamin'izay hamaroany rehetra.
Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony; Ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito tamin'ny asany rehetra izay efa nataony.
Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharany tamin'ny asa rehetra izay nataony tamin'ny nanaovany ny zavaboary.
Genesisy 2: 1-3
Na ara-bakiteny na an-tsary, ny tantaran'ny famoronana dia mampiseho amintsika fa Andriamanitra no namorona an'izao tontolo izao. Tsy resaka kisendrasendra izany. Ny fahariana an'izao tontolo izao dia mampiseho amintsika koa ny hasarobidintsika amin'ny maha zavaboary noforonina araka ny endrik'Andriamanitra sy ny anjara toerantsika amin'ny maha mpitondra sy mpiaro ny tany antsika. Faly Andriamanitra amin'ny zavaboariny ary te hitahy antsika amin'ny fitsaharana.
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity nanao ahoana ny famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly. Raha izao dia te hahalala ianao nahoana Andriamanitra no nitsahatra tamin'ny andro fahafito, manohy mizaha Discover.online.
Fa maninona Andriamanitra no nitsahatra tamin'ny andro fahafito?